प्रचण्ड र माधव नेपाललाई भेट्न बालकुमारी किन पुगे विष्णु पौडेल ? | Safal Khabar
प्रचण्ड र माधव नेपाललाई भेट्न बालकुमारी किन पुगे विष्णु पौडेल ?
शुक्रबार, १२ असार २०७७, ०८ : ५९
काठमाडौं । नेकपामा शक्ति संर्घष पेचिलो ढंगले अगाडी बढेको छ । बुधबारदेखि शुरु भएको स्थायी समितिमा प्रचण्डकै शब्दमा भन्ने हो भने फाइट टु फिनिस गर्नुपर्ने विषय धेरै छ । पूरानै विषय र एजेण्डाको गोलचक्कर मारिरहेको नेकपाले यसपटक पनि बैठकमा नयाँ एजेण्डा बोकेर ल्याएको त छैन, उही पूरानै दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन, सरकारको समिक्षा, एक ब्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी, विधान अनुसार पार्टी सञ्चालनका आन्तरिक विषय दोहोरिने छन् ।
एमसिसि पनि एक वर्ष यता नेकपाको बैठकमा गर्मागर्मी बहसका लागि एउटा गतिलो एजेण्डा बनेको छ । सरकार र एमसिसिका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली लचिलो नबन्ने हो भने उनका लागि स्थायी समिति बैठक महँगो पर्ने देखिदैंछ । यो परिस्थितीका बीच स्थायी समिति बैठक शुरु भएपनि यसको बैठान कसरी गर्छन् नेताहरुले त्यसको प्रष्ट चित्र अध्यक्षद्धयसँग पनि छैन् । पहिले नेताहरुका कुरा सुनौं, त्यसपछि बैठक समापनका लागि कस्तो रणनीति अवलम्वन गर्ने भन्ने छलफल गरौंला भनेर बैठक नेताहरुले शुरु गरेका हुन् । खासगरी एमसिसिमा नेकपाले के निर्णय गर्ला ? सरकारको कामको समिक्षा बैठकले कसरी गर्ला ? भन्नेमै चासो सवैभन्दा बढी देखिन्छ ।
यसैमा दुई अध्यक्षको वार की पारको अवस्था छ । माधव नेपालको पनि प्रचण्डसँगै बोली मिलेको छ । उनी पनि एक ब्यक्ति एक जिम्मेवारीको अडानमा दरो उभिने संकेत देखिइसकेको छ । यो बेला नेताहरुले संयमता नअपनाउने र सुझबुझपूर्ण निर्णय नगर्ने हो भने नेकपा गल्र्यामगुल्लम ढल्न सक्ने आशंका नेकपाका नेताहरुले गरेका छन् । यो जेखिमतालाई कसरी दुर गर्ने भन्नेमा महासचिव विष्णु पौडेलको दौडधुप जारी छ ।
ओली पक्षधर पौडेल अहिले प्रचण्ड ओली मिलाउन निक्कै मेहनत गरिरहेका छन् । ओलीसँगको प्रचण्डको सम्वादहिनतामा पनि महासचिव पौडेल दुवै पक्षका दूतका रुपमा सन्देश आदानप्रदानका बाहक बन्न खोजिरहेका देखिन्छन् । अहिले पनि उनको दौडधुप कहिले खुमलटार, कहिले बालुवाटार र कहिले कोटेश्वर उत्तिकै मात्रामा भईरहेको छ ।
बिहिवार पनि उनले त्यस्तै निर्णयक दुई छलफलमा सहभागीता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिउँसो आजबाट स्थायी समिति बैठकमा नेताहरुलाई बोल्न दिने समय के कसरी म्यानेज गर्ने ? बैठक कति दिन सम्म चलाउने ? कस्ता विधि अवलम्वन गर्ने ? भन्ने दुई अध्यक्षको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका बीच चलेको छलफलमा मध्यस्थताका लागि महासचिव पौडेल सहभागी थिए । त्यसपछि प्रचण्ड र नेपाल बीचको छलफलमा पनि पौडेल पुगेर छलफल गरेको पौडेल निकट एक नेताले सफलखबरलाई बताए । प्रचण्ड र नेपालले अहिले केही छलफल गर्नुपरे आफ्ना निवास भन्दा बाहिर वालकुमारीमा रहेको नेकपा सांसद कृष्णलाल महर्जनको निवासलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
आफ्नो निवासमा भेट गर्न आउने नेता कार्यकर्ताहरुको घुँइचोलाई छलेर निर्वाध छलफलका लागि पनि प्रचण्ड नेपालले बेला बेला बालकुमारीमा रहेको सांसद महर्जनको घरमा छलफल गर्ने गरेका थिए । बालुवाटारमा बैठक सञ्चालन कार्यविधि र समापनका विषयमा छलफल गरेर बाहिरिएका प्रचण्डसँग नेपालले भेट गर्न चाहे । त्यसपछि तय भएको थियो, बालकुमारीमा रहेको महर्जन निवासमा प्रचण्ड नेपालको भेटवार्ता । त्यही महासचिव विष्णु पौडेल पनि पछि पुगेका थिए ।
पौडेलले पार्टी विवाद तन्काउने भन्दा मिलाउने गरी जान के गर्न सकिन्छ भन्ने उपायमा छलफल दुई नेतासँग बसेर गरेको पौडेल निकट ति नेताले बताए । पौडेल अहिले विवादमा रहेको एमसिसिलाई तत्काल थाती राख्ने, एमसीसीसाग अनुमोदनका लागि समय माग गर्ने र केही समय लिएर नेताहरुले उठाएका विषयमा थप प्रष्टताको खोजी गरेर मात्र अनुमोदनमा जाने गरी विकल्पमा जानुपर्ने गरी मध्यमार्गी धारको प्रस्ताव ओली र प्रचण्ड सँग गरिरहेका छन् । उनकै सोही धारकै आधारमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुडले पनि अहिले विवाद हुन्छ भने थाती राखेर अगाडी जान सकिने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
एक ब्यक्ति एक पदका विषयमा विगतमा भएका कार्याविभाजनमा धेरै नअल्झिन र अबका दिनमा त्यसमा चलाखीपूर्ण ध्यान केन्द्रीत गरेर जाने, सरकारका मन्त्रीहरु हेरफेरमा माधव नेपाल पक्षका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन प्रयास गर्ने र सरकारलाई प्रभावकारी वनाउने विषयमा बहस गरेर त्यहीभित्र विकल्पको खोजीमा लाग्नु पर्ने गरी नेताहरु बीचको मिलनविन्दु पौडेल अहिले खोजीमा लागिरहेका छन् । भलैं, पौडेलले गरेका छलफल स्वंम ओलीले कति सुन्छन् ? त्यो भने बैठकको समापन सम्म कुर्नपर्ने देखिएको छ । तर पनि पौडेलले आफनो दौडधुपलाई रोकेका भने छैनन । त्यही क्रममा उनले बालकुमारी पुगेर माधव नेपाल र प्रचण्डसँग भेट गरेको उनी निकट नेताहरुको जिकिर छ ।